Qoraal uu qoray Dr. Ahmed - Amjambo Africa
Qoraal uu qoray Dr. Ahmed
Farqiga guul gaaridda ee u dhexeeya ardayda dakhligoodu hooseeyo iyo ardayda laga tira badan yahay iyo ardayda kale ee kunool Maine waa mid ballaaran, joogto ah, oo walwal leh, waxaanan jeclaan lahaa inaan weydiisto caawimaadda bulshada si wax looga qabto dhibaatadan aadka muhiimka u ah.
Xirfadlayaasha dugsiyada dhiga ayaa si wanaagsan uga shaqeeya inay ka caawiyaan ardayda oo dhan inay gaaraan heerarka ugu sareeya ee suurtogalka ah, laakiin ma awoodaan kaligood inay xiraan farqiga- waxaan u baahan nahay waalidiinta inay caawiyaan. Wakhtigan sanadka, marka inbadan oo inaga mid ah sameyso qaraarada sanadka cusub, waxaan jeclaan lahaa inaan soo jeediyo kaqayb qaadasahada bulshada, oo loogu talagalay in lagu riixo ardayda oo dhan inay gaaraan heer waxbarasho sare.
Cilmibaaridda ayaa muujineysa in akhriska joogtada ah ee ardayda ay muhiim u tahay guusha tacliimeed, laakiin macallimiintu waxay ogaadaan in caruur badani aysan si joogto ah guriga wax ugu aqrin. Sababtoo ah aqrisku wuxuu xiriir adag la leeyahay in ardaydu aay guul gaarto. Waa in la sameeyo qaraar diirada lagu saarayo akhrinta – waana in aan hubinno in caruurteena, da’a kastoo ay yihiin, ay guriga ku aqriyaan ugu yaraan 30 daqiiqo maalin kasta.
Waalidku waxay leeyihiin jadwal mashquul ah, waan ogahay. Inbadan waxay ka shaqeeyaan labo iyo sedex shaqo waxayna wali halgan ugu jiraan sidii ay uheli lahaayeen waxyaabaha ay ubaahan yihiin. Hadana ma jiro wax ka muhimsan mustaqbalka carruurteenna. Illaa ay ilmuhu ka dhigayaan caado wax aqrinta, waxay u baahan yihiin dadka waaweyn si ay u hubiyaan inay si joogto ah wax u akhriyaan. Marka, aan sameynno go’aan bulshada dhan ay qaadato oo xitaa haddii aan ku mashquulsannahay jadwalkeena mashquulka ah, waxaan hubin doonnaa in carruurteenna ay wax akhriyaan 30 daqiiqo maalin kasta.
Haddii waalidiinta laftooda aanay la aqrin karin carruurtooda sabab kasta ha ahaate, fadlan isku day inaad siiso qaabdhismeyaasha looga baahan yahay inay tani dhacdo. Waxaad waydiin kartaa macalimiinta inay taageeraaan caruurtaada, ama weydii walaalaha ka waaweyn ama xubnaha kale ee bulshada. Xitaa carruurta ugu yar yar, oo aan weli wax akhrin karin, waa inay waqti la qaataan buugaagta maalin kasta – ama in loo akhriyo, ama la siiyo buugaagta sawirka si’ay u daawadaan. Sidan, waxay kadhigan doonaan caado waxayna baran doonaan dhaqanka buugaagta.
NextInjineerka Naqshadeynta farsamada Oumalkaire Said Barkad wuxuu bixiyaa talo ku saabsan wax ka qabashada yaraanta shaqaalaha Maine